मन्त्री आलेका कारण सयौं मानिस खतरामा, कहाँ-कहाँ पुगेका थिए आले ? – List Khabar
Home / समाचार / मन्त्री आलेका कारण सयौं मानिस खतरामा, कहाँ-कहाँ पुगेका थिए आले ?
मन्त्री आलेका कारण सयौं मानिस खतरामा, कहाँ-कहाँ पुगेका थिए आले ?
admin January 17, 2022 समाचार Leaveacomment 52 Views
काठमाडौ । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका कारण सयौं मानिस खतरामा परेका छन् । उनलाई कोभिड पुष्टि भएपछि उनको सम्पर्कमा रहेका सयौं मानिस जोखिममा परेका हुन् । मन्त्री आले आइतवार सम्म विभिन्न कार्यक्रममा सकृय थिए । उनका अघि पछि लागेका सुरक्षाकर्मी, केही कार्यकर्ता र उनका समर्थकहरु पनि जोखिममा परेका छन् ।
त्यसवाहेक उनी पुगेका स्थानमा रहेकाहरु पनि कोभिडको खतरामा परेका छन् । मन्त्री आलेलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीसँग सम्पर्कमा आएका सयौं कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा परेका छन् । आले २ गते आइतवार मात्र पशुपतिनाथ मन्दिरको धर्मशाला पुगेका थिए । त्यहाँ जाँदा उनका अघि पछि केही मानिस थिए भने धर्मशालाको कोठा कोठा प्रवेश गरेका थिए ।
आलेका कारण पशुपति धर्मशालाका कर्मचारी पनि ट्रेसिङमा परेका छन् । पशुपति धर्मशालामा पसेर फर्किएका आले नारायाणहिटी संग्राहालय पनि पुगेका थिए । त्यहाँ पनि उनको सम्पर्कमा पुगेकाहरु खतरामा परेका छन् । नारायाणहिटी संग्राहालयको बं क र भित्र पनि उनी पसेका थिए । त्यस समयमा त्यहाँका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । उनीहरु पनि कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा परेका छन् ।
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार कोभिड भाइरस महामारीको त्रा स मा परेको छ । चार सचिवसहित सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कोभिड संक्रमण भएपछि त्रा स बढेको हो ।
प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तीन सचिवलाई कोरोना भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, रामप्रसाद थपलिया र कृष्णबहादुर रावतलाई संक्रमण भएको प्रवक्ता महादेव पन्थले जानकारी दिए । थपलिया कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसिसी) का प्रमुख पनि हुन् । उनलाई कोभिड भएपछि सिसिएमसिसीको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराईलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित सचिवहरू होमआइसोलेसनमा छन् ।
सिंहदरबारमा संक्रमण पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टिमले पिसिआर परीक्षण गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका मात्र ४० कर्मचारीलाई कोभिड पुष्टि भएको छ ।
तर, सिंहदरबारभित्र कति कर्मचारी संक्रमित भए भनेर एकीकृत तथ्यांक छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार कोरोना संक्रमण भएका कर्मचारीलाई कोभिड काज बिदा दिने गरिएको छ । यो बिदा बढीमा १४ दिन हुन्छ ।
Previous मंगल-शुक्रले एकै समयमा मच्चाउँदै ठूलो उथलपुथल, यस राशिका मानिसलाई अत्यन्त अशुभ !
Next Breking: नेपालमा आजै थपिए यति धेरै सङ्क्रमित ?